Vary varimbazaha | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Vary varimbazaha
Fantaro ireo karazan-tsakafo tsara indrindra
Ny bitroot dia kolontsaina maro samihafa. Misy ny maro amin'ireo kolontsaina ireo, ary samy hafa amin'ny endriny, ny tsirony, ary ny habetsahany. Ity ronono ity, izay ampiasaintsika amin'ny famohana borscht, dia atao hoe efitra fisakafoana. Ny ronono fodiana dia ampahany manan-danja amin'ny sakafon'ny biby an-trano.
Famaritana sy fambolena voaloboka ao Pablo
Beets dia azo jerena amin'ny lafiny latabatra ao amin'ny firenena. Manampy amin'ny sakafo voalohany sy faharoa, salady izy io, satria salama dia tena salama tsara ary manana tsiro tsara. Androany, ny karazam-bozaka fanaingoana latabatra Pablo F1 dia lasa malaza kokoa noho ny fambolena azy. Momba azy ary horesahina bebe kokoa.
Karazana voankazo fambolena
Amin'ireo karazan-tsakafo rehetra dia misy toerana mendrika. Sakafo tsy azo ianteherana amin'ny ririnina amin'ny biby fiompy. Mankalaza ny omby, ny kisoa, ny bitro, ny soavaly izy. Ny zavamaniry dia manankarena amin'ny fibre, pectin, fibre fitaratra, carbohydrates, saline mineraly ary proteinina. Ny ronono dia mampitombo ny sakafon'ny ronono mandritra ny vanim-potoan'ny biby fiompy miaraka amin'ny sakafo maina.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Vary varimbazaha